कस्तो यो मायाप्रिति ? ३५ जना गर्लफ्रेण्डसँग एकैसाथ डेट, तर एक गल्तीले फसे प्रेमी... - नेपाल कुरा
कस्तो यो मायाप्रिति ? ३५ जना गर्लफ्रेण्डसँग एकैसाथ डेट, तर एक गल्तीले फसे प्रेमी…
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०७८, बुधबार April 28, 2021 , संवाददाता: Yukta
एजेन्सी । माया … लभ का यी शब्दहरूमा डुबेपछि मानिसहरु प्राय आफुलाई सम्भाल्न सक्दैनन् । मायाको गहिराइमा डुबेको व्यक्तिले यस संसारमा आफ्नै इन्द्रियहरू पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन भनिन्छ । जेहोस् सबैको जीवनमा प्रेम केवल एक पटक हुन्छ । तर यहाँ केहि यस्ता मानिसहरु पनि छन्, जो कहिलेकाँही यी खुशी क्षणहरु धेरै पटक पाउने चाह राख्दछन् । यस्तैमा एक रोमिओ अगाडी देखिएका छन् जसले १,२ जना नभई ३५ जना केटीहरूलाई आफ्नो मायाको चुँगुलमा फसाए । लगातार तिनीहरूबाट उपहार लिए र कसैलाई यसको बारेमा थाहा नै भएन । … तर उसको एउटा गल्ती भारी भयो । के थियो त्यो गल्ती र कसरी ती रोमियोको सच्चाई उनको सबै जुलियतहरुका सामु आयो ? जान्नेछौँ एक रिपोर्टमा..
तपाईंले एक पटकमा एक वा दुई गर्लफ्रेंडको सम्बन्धहरु धेरै हेरेको र सुन्नु भएको हुनुपर्छ । तर यदि एक जना व्यक्तिले एकै समयमा ३५ प्रेमिकासँग डेटिङ गरिरहेको कुरा सुन्नुहुँदा झट्ट विश्वास नलाग्न सक्छ । तर विश्वास गर्नुहोस् यो कुरा साँचो हो र एउटा व्यक्तिले ३५ जना आइमाइहरुसँग मज्जाले डेटिङ गरिरहेका थिए । यो अचम्मको घटना जापानको हो । न्यूयोर्क पोष्टको एक रिपोर्टको अनुसार पुलिसले एकै समयमा ३५ विभिन्न महिलासँग सम्बन्ध राख्ने एक मानिसलाई पक्राउ गरेको छ । यो मानिसको पहिचान ३९ बर्षीय ताकाशी मियागावाका रूपमा खुलेको छ । यो केस धेरै चाखलाग्दो तरीकाले उजागर भएको थियो ।
रिपोर्टका अनुसार, ताकाशी मियागावाकी पहिलो प्रेमिकाले उनलाई उपहार दिए, त्यसपछि उनलाई धेरै विशेष र राम्रो महसुस भयो । यसपछि, उपहारकोे लालसा उनमा बढ्दै गयो । गिफ्टको चक्करमा उनले नयाँ गर्लफ्रेंडहरु बनाउन शुरु गरे । यो संख्या केही दिनमानै ३५ सम्म पुग्यो । यस घटनामा चाखलाग्दो कुरा के छ भने उनले कुनै पनि पुरानो प्रेमिका छोडेका छैनन् । उसले सबैलाई एकसाथ डेट गर्दथे ।
ताकाशी मियागावाले आफ्नो सबै गर्लफ्रेण्डलाई जन्मदिनको अलग अलग समय बताउँदथे । कसैलाई २२ फेब्रुअरी, ७ अप्रिल, कोहीलाई १९ जुलाई, र कसैलाई २१ डिसेम्बर, सबैलाई छुट्टाछुट्टै जन्मदिन भने । जबकि उनको वास्तविक जन्मदिन १४ नोभेम्बरमा पर्दछ । तर सबैलाई फरक फरक मिति बताएर उनीहरू सबैसँग बिभिन्न दिनमा पार्टी गरे र महँगो उपहारहरू लिए ।
पुलिसका अनुसार आरोपित ताकाशी मियागावा एक पार्ट टाइम कामदार हुन् जसले घर घर घरमा सामान बेच्दछ । मियागावा यी सबै महिलाहरूलाई मार्केटिंग कम्पनी मार्फत शुरुमा भेट्दथे । उसले आफ्नो सामानहरु यी महिलालाई पहिला एकएक गरी बेच्न शुरु गरे र पछि ती सबै महिलाहरूलाई पालै पालो आफ्नो गर्लफ्रेन्डहरू बनाउन शुरु गर्न थाले ।
तर जब एकदिन गर्लफ्रेण्डहरु मध्येकी एउटी आइमाईलाई मियागावाबाट धोका भइरहेको महसुस गरिन् उनले तुरुन्तै पुलिसमा गएर उजूरी गरिन् । जब पुलिसले अनुसन्धान सुरु गरे तब स्तब्ध पार्ने खुलासाहरू एकपछि अर्को प्रकट हुँदै गए । यसपछि, मियागावाका ३५ प्रेमिकाहरु एक एक गर्दै अगाडी आइन् । लगभग ती सबै महिला एकल नै रहेको बुझिएको छ । आरोपित ती केटीहरुलाई झूट प्रेमको नाटक र विवाह गर्ने आश्वासन दिएर फसाउँथे मियागावा । उनी अहिले पुलिस हिरासतमा छन् । मिडियाले उनलाई ’जापानी रोमियो’ को नाम दिइरहेका छन् ।
पुलिसले बताए कि यी सबै महिलाहरूले मियागावालाई एक भन्दा बढी महँगो उपहार दिएका छन् । यसमा कपडा, धेरै महँगो सामान, गाडी र नगद पनि समावेश छ । अभियुक्तको कुनैपनि बस्ने ठाउँ समेत छैन।
महामारीबाट बच्न चमेरोको पूजा !
पढ्नुहोस्, विश्वको पहिलो फास्ट फुड ‘समोसा’ को कथा